Mụtakwuo banyere Bright Star Sirius
Sayensị Kpakpando & mbara ala
Sirius: Star Star
Sirius, nke a makwaara dị ka Dog Star, bụ kpakpando na- egbuke egbuke na mbara igwe. Ọ bụkwa kpakpando nke isii nke kachasị nso na Earth, ma dina n'ebe dị anya nke ọnwa 8.6 (afọ nke dị afọ bụ ebe ìhè na-aga n'ime otu afọ). Aha "Sirius" sitere na okwu Grik oge ochie maka "ọnwu" ma ọ masịcha ndị na-ekiri ihe niile na akụkọ ntolite mmadụ.
Ndị na-enyocha mbara igwe malitere iji nlezianya mụọ Sirius na 1800, ma nọgide na-eme ya taa.
A na-ekwukarị na map na map dịka Alpha Canis Majoris, kpakpando na-egbuke egbuke na ìgwè kpakpando Canis Major (Nnukwu Dog).
A na-ahụ Sirius n'ọtụtụ akụkụ ụwa (ma e wezụga maka ebe ugwu ma ọ bụ n'akụkụ ndịda), a pụkwara ịhụ ya mgbe ụfọdụ n'ụbọchị, ọ bụrụ na ọnọdụ dị mma.
Onye na-enyocha mbara igwe bụ Edmond Halley hụrụ Sirius n'afọ 1718 wee kpebie imegharị ya kwesịrị ekwesị (ya bụ, ntụgharị ya na mbara igwe). N'ihe karịrị otu narị afọ mgbe nke ahụ gasịrị, onye na-enyocha mbara igwe bụ William Huggins tụnyere oge ọsọ Sirius site n'iji ụdị ìhè ya, nke gosipụtara data banyere ọsọ ya. Nhọrọ ndị ọzọ gosipụtara na kpakpando a na-agagharị na Sun na ọsọ ọsọ nke ihe dị ka kilomita 76 kwa nkeji.
Ndị na-enyocha mbara igwe na-enyo enyo na Sirius nwere kpakpando kpakpando. Ọ ga-esi ike ịhụ ebe Sirius n'onwe ya na-enwu gbaa. N'afọ 1844, FW Bessel jiri nyocha nke nrụgharị ya iji chọpụta na Sirius nwere enyi.
Ihe nchoputa ahu kwadoro site na ihe ndi ozo n'afo 1862. ugbu a ka amara na o buru oke ocha. Sirius B, enyi ya, enwetala anya ya onwe ya, ebe ọ bụ na mbụ whitewar dwarf (onye dị afọ nke kpakpando ) nke nwere ụdị dị iche iche iji gosiputa mgbanwe ntụgharị dị egwu dị ka nke nkwupụta zuru ụwa ọnụ nke mmekọrịta .
Sirius B (kpakpando ndị na-adịghị ahụ anya) achọpụtabeghị ruo mgbe 1844, ọ bụ ezie na e nwere akụkọ na-ese n'elu ebe ụfọdụ na mmepeanya oge mbụ hụrụ enyi a. Ọ ga-abụrịrị ihe siri ike ịhụ n'enweghị teliskop, ọ gwụla ma onye ahụ na-enwe ezigbo ọkụ. Ihe ndi ozo na nso nso na Hubble Space Telescope ejirila kpakpando tụọ, ma kpughee na Sirius B bu nani nha Earth, mana o nwere uka nso nke Sun.
Iji Sirius tụnyere Sun
Sirius A, nke bụ isi n'ime usoro ahụ, dị ihe dị ka okpukpu abụọ dị ka anyanwụ anyị. Ọ dị okpukpu iri abụọ na ise, ọ ga-amụbawanye na-egbuke egbuke ka ọ na-abanye nso na mbara igwe na n'ọdịnihu n'ọdịnihu. Mgbe anyanwụ anyị dị ihe dịka ijeri 4.5, Sirius A na B na-eche na ọ bụ ihe karịrị nde afọ 300.
Ntak emi ẹkedọhọde Sirius "Udi Dog"?
Igwe a enwetawo aha "Dog Star" ọ bụghị naanị n'ihi na ọ bụ kpakpando kachasịnụ na Canis Major. Ọ dịkwa oke mkpa nye ndị na-agụ kpakpando n'oge ochie maka amụma ọhụụ nke mgbanwe oge. Dịka ọmụmaatụ, n'Ijipt oge ochie, ndị mmadụ na-ele Sirius anya ka ọ bilie tupu anyanwụ amalite. Nke a akara oge mgbe osimiri Naịl ga-eju mmiri, ma mee ka ugbo ndị dị nso jikọtara ya na ọgaranya.
Ndị Ijipt mere ememe a na-achọ Sirius na oge kwesịrị ekwesị - ọ dị mkpa ka ọha mmadụ. Rọm ahụ na-ekwu na oge a nke afọ, nke na-adịkarị n'oge okpomọkụ, bịara mara dị ka "ụbọchị" nke oge ọkọchị, karịsịa na Gris.
Ndị Ijipt na ndị Grik abụghị nanị ndị nwere mmasị na kpakpando a. Ndị na-eme nchọpụta na-agagharị agagharị na-ejikwa ya mee ihe dị ka ihe akara eluigwe, na-enyere ha aka ịnyagharị gburugburu oké osimiri. Dịka ọmụmaatụ, nye ndị Polynesia, bụ ndị a rụzuru ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ruo ọtụtụ narị afọ, a maara Sirius dịka "A'a" na ọ bụ akụkụ nke ụyọkọ kpakpando ndị na-agagharị agagharị ha na-eji agafe na Pacific.
Taa, Sirius bụ ọkacha mmasị nke ndị na-agụ kpakpando, ọ na-anụkwa ọtụtụ akụkọ banyere akụkọ sayensị, utu aha, na akwụkwọ. O yiri ka ọ na-egbuke egbuke, ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ọrụ nke ìhè ya na-agafe ikuku ụwa, karịsịa mgbe kpakpando dị ala.
Nwanna Carolyn Collins Petersen deziri ma degharịa ya.
A na-eme njem nke ọnwa ọnwa Jupiter
10 Ihe di egwu nke Jupiter si na Juno Mission
Stars na Gas Crash na Galaxy na celestial mbufịt
Na Tale of the Martian Tsunamis
Kedu Afọ Ochie Bụ Star?
A kọwara ọnwa Blue
Hụ na Perseid Meteor Shower
Akpịrị Na-acha Anụ Anụ Na-ezipụ Gburugburu Osimiri
Ọdịnihu Eta Carinae na-ejighị n'aka
Ije njem site na mbara igwe: Ụwa Jupiter
Igwe kacha elu nke 10 kachasị oke
Na-enyocha Dragonfly 44: Galaxy Gbara Ọchịchịrị
Agha Obodo Amerịka: Brigadier General Nathaniel Lyon
Okwu Amụma nke iri afọ nke 20 dị ka akwụkwọ ederede
Nkewa (nke okwu)
3 Ụzọ iji dochie akwụkwọ afọ maka afọ ndị ọzọ
4 Eziokwu Banyere ihe ndaputa ala ndi America
Ịmepụta Ntọala Njikọ Ọdịdị na Ịgba Oge
A na-agbanye ụgbọ mmiri Batrị
Gini bu okwu efu?
Kedu ihe bụ omenala 5?
Gịnị Na-eme Mgbe Mpempe Mmanụ Ere?
Okwu Mmalite gị na Dance Jazz
ỤLỌ - Aha aha Aha na Akụkọ Ezinụlọ
Top 10 Igwe Ihe Ọjọọ na-egbu egbu
Eziokwu ise na Egwuregwu Eletriki
Wee vs. Abụọ vs. Iji: Akwụsị Ekekọrịta England
Ihe osise ahụ
Kedu ihe bụ Akwụkwọ Nsọ maka Purgatory?
Otu esi egwu Cory Chord na Guitar
Ihe Nkume Akpado nke Ide Ide
Mahadum Mahadum Wake GPA, SAT, na ACT Data
A Biography nke Erving Goffman